च्याम्पियन स्पटलाइट: लौरा आर्से लाई भेट्नुहोस्
Grace मा सेप्टेम्बर 23, 2021 द्वारा लिखित।
लौरा Arce को लागी, MAF मा सामेल हुनु घर फर्कने जस्तो लाग्छ।
MAF को एक सदस्य को रूप मा उनको नयाँ भूमिका निर्देशक बोर्ड उसलाई एक प्रतीकात्मक अर्थमा - खाडी क्षेत्र मा फिर्ता ल्याईयो, जहाँ उनी जन्मे र हुर्केकी थिइन्। कलेज पछि वर्षौंदेखि, लौरा अन्यत्र समय बिताएकी थिइन्: क्यापिटल हिल, बेइजि in मा, सरकारी एजेन्सीहरु वा सानो परामर्श वा वेल्स फार्गो जस्ता ठूला बैंकहरु को लागी काम गरीरहेकी छिन्, जहाँ उनी हाल उपभोक्ता बैंकि and र ndingण नीति को एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष को रूप मा सेवा गरीरहेकी छिन्।
तर २०२० मा, जब कोभिड -१ everyone ले सबैको जीवन बिगार्‍यो, लौरालाई एक डरलाग्दो एपिफेनी थियो।
उनी भन्छिन्, "मलाई लाग्यो कि म मेरो जरा हराइरहेको छु।" यो मात्र होईन किनकि लौरा सजिलै संग आफ्नो गृहनगर फर्कन को लागी एक हवाई जहाज चढ्न सकेनन्। यो पनि थियो किनभने उनको पेशेवर क्यारियर व्यक्तिगत बाहिर पैदा भएको थियो - र यो समय लौरा को लागी आफ्नै मूल कहानी संग जोडिएको थियो।
लौरा ओकल्याण्ड मा एक मेक्सिकन आप्रवासी परिवार मा हुर्के।
उनका आमा बुबा गैर नाफामुखी कामदारहरु थिए, र उनले आफ्नो प्राथमिक विद्यालय को धेरै समय स्पेनिस बोल्ने एकता काउन्सिल, एक सामुदायिक संसाधन केन्द्र जहाँ उनको बुबाले काम गरीरहेकी बिताए।
लौरा उनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव को एक को रूप मा आफ्नो बुबा उद्धृत गर्दछ। त्यो आंशिक रूपले सामुदायिक काम को लागी प्रारम्भिक आत्मीयता को कारणले उनी उनी मा भनिएको थियो, र आंशिक रूपमा यो तथ्य को कारण हो कि, एक बच्चा को रूप मा, उनी प्राय जसो उनको आफ्नै परिवार लाई वित्तीय मुख्यधारा बाट बाहिर राखिएको थियो। उनको आफ्नै हजुरबुबालाई बैंकहरुमा भरोसा थिएन। हरेक पटक उसले बिल, फोन, पानी, केहि पनी तिर्दछ - उसले बस को डाउनटाउन लाई उसको सम्बन्धित कार्यालयमा लैजान्थ्यो र नगद तिर्थ्यो।
"यसले उसलाई धेरै समय र अतिरिक्त प्रयास खर्च गर्यो। तर उनले यो आफ्नो वयस्क जीवन को सबै गरे, "लौरा भन्छन्। यो एकैचोटि यति धेरै नगद बोक्न को लागी जोखिमपूर्ण थियो, तर उनको हजुरबुबा एक बैंकिंग संस्था को तुलना मा डलर बिल मा आफ्नो विश्वास राख्नुहुनेछ। मुद्रांकित रसिदहरु लाई सावधानीपूर्वक सुरक्षित गरीएको थियो, र एक पासबुक बचत खाता विरलै छोईयो।
यो प्रक्रिया "सामान्य" लौरा को लागी लाग्यो जब सम्म उनी यूसी बर्कले मा कलेज शुरू गरे। जब लौराका हजुरबुबा मुद्रित कागज रसिदहरु बचाई रहनु भएको थियो र आफ्नो बैंक खाता मा धूलो जम्मा गर्न को लागी, लौराका सहपाठीहरु क्रेडिट कार्ड को उपयोग गरेर "जादुई" आफ्नो किताब र आपूर्ति को लागी तिर्दै थिए। जबकि उनको रूममेट को आमा बुबाले आफ्नो घरमालिक को चेक मेल गरे, लौरा उनको आफ्नै बैंक खाता को लागी जिम्मेवार थियो। उनी आफ्ना अनुभव र सहपाठीहरु बीचको असंगति देखेर दंग परे।
यी सबै मतभेद लौरा को लागी lightbulb क्षणहरु जस्तै थिए। "कोही बैंकिked्ग नभएको, कोहि बैंकि, भएका छन्, जसको creditण छ, को छैन। त्यहाँ दौड, जातीयता, आय स्तर, भौगोलिक क्षेत्र मा स्पष्ट असमानताहरु छन्, "लौरा भन्छन्। र उनको परिवार ती चौराहहरुमा बस्थे।
लौरा भन्छिन्, "मेरो मामिलामा पनि, जहाँ मेरा आमा बुबा शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, र हजुरबुबा हजुरबा हजुरआमा जो बच्चाहरु थिए जो उनीहरुलाई मद्दत गर्न सक्थे - उनीहरु underbanked थिए," लौरा भन्छन्। "उनीहरु वित्तीय मुख्यधारा बाहिर थिए।"
MAF को वित्त र लेखा समिति मा लौरा को स्थिति उनको जरा सम्मान को एक तरीका हो।
लौरा भन्छिन्, "मैले निर्णय गरें कि म सिकेका र बनाएका सबै थोक लिन चाहन्छु।" "र म फेरी धेरै समुदाय आधारित काम मा संलग्न हुन चाहन्छु।" उनको भूमिका एक प्रकार को हो कि एक निश्चित दर्शन लाई विवाह गर्दछ लौरा लाई बैंकि gap्ग खाडल लाई व्यवस्थित गर्न को लागी वित्तीय सेवाहरु बाट बहिष्कृत गरीएको छ - जस्तै हजुरबुबा।
"यो एक सजिलो बटन हो कि हामी सबै थिच्न सक्छौं," लौरा भन्छन्। "यसले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छ, र यो पब्लिक नीति पनि लिने छ जसले ती लक्ष्यहरुलाई समर्थन गर्दछ, साथै MAF जस्ता समूहहरुको प्रयास, जो त्यहाँ बाहिर रहन र अधिक अवसर लिन इच्छुक छन्।"
र जब लौरा आफ्नो सार्वजनिक नीति र निजी क्षेत्र पृष्ठभूमि बोर्ड वार्तालाप मा ल्याउन चाहान्छिन्, उनी पनि आफ्ना साथीहरु बाट सिक्न को लागी आशा गरीरहेकी छिन्। लौरा भन्छिन्, "म यी बैठकहरु मा हुन को लागी उत्साहित छु र हामी कसरी साँच्चै चुनौतीपूर्ण समस्याहरु लाई सम्बोधन गर्दछौं को बारे मा यी सबै कुराकानी सुन्न," लौरा भन्छन्। दुबै एक "राष्ट्रिय नेता" र एक समुदाय आधारित संगठन को रूप मा MAF को काम परिप्रेक्ष्य को प्रकार हो कि उनी MAF बाहिर आफ्नो काम गर्न चाहन्छन्, चाहे यो सरकारी एजेन्सीहरु वा ठूला बैंकहरुमा हो।
त्यो आंशिक रूपमा हो किनभने लौरा एक जिम्मेवारी महसुस गर्दछ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरु मा आफ्नो क्यारियर को दौरान, लौरा अक्सर कोठा मा केहि ल्याटिना महिलाहरु मध्ये एक भएको छ। "मेरो विशेषज्ञताको हिस्सा मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि हो," उनी भन्छिन्। सबै लौरा संग काम गरेको छैन एक आप्रवासी समुदाय मा हुर्किएको छ। सबैको परिवारका सदस्यहरु छैनन् जो अंग्रेजी बोल्दैनन्, वा जो बैंकहरुमा भरोसा गर्दैनन्। सबैले सोध्ने छैनन्, "समुदायहरु को कुन भागहरु छन् जो पछाडि छोडिएका छन् र सेवा दिइरहेका छैनन्? र म के गर्न सक्छु? "
तर लौरा हुनेछ। "म त्यो आवाज को प्रतिनिधित्व गर्दछु," लौरा भन्छन्। "यो मेरो लागी साँच्चै महत्वपूर्ण छ, र म यसलाई धेरै गम्भीरता ले लिन्छु।"